Harena an-kibon’ny tany: mitaraina ny mpitrandraka madinika | NewsMada
Harena an-kibon’ny tany: mitaraina ny mpitrandraka madinika
Par Taratra sur 15/03/2019
Mila fiofanana sy ampahafantarina ny lalàna ny mpitrandraka sy mpandraharaha madinika malagasy amin’ny harena an-kibon’ny tany. Tsy eken’izy ireo koa ny hividianan’ny vahiny aziatika sy afrikanina mivantana ny vato any amin’ny kariera.
Natao, omaly, teny amin’ny foibe MBC Ivato, ny atrikasa ho fakan-kevitra hiadiana amin’ny tsy fanarahan-dalàna amin’ny sehatry ny harena an-kibon’ny tany. Nikarakara azy ny minisiteran’ny Harena an-kibon’ny tany sy ny loharanonkarena stratejika (MMRS) ary nandray anjara tao avokoa ny mpisehatra rehetra amin’ny harena an-kibon’ny tany.
Anisan’ny olana mampitaraina ny mpandraharaha madinika malagasy ireo vahiny mpividy vato, indrindra ny Sinoa, ny Srilankey ary ny Afrikanina. Nilaza Rtoa Ravaonirina Lalarisoa Jeannette, fa tsy mifandanja ny hoenti-manana eo amin’ny mpandraharaha malagasy sy ny vahiny, ka tsy hita soritra mihitsy ny fifaninanana. Angatahan’izy ireo ny handraràna ny vahiny hividy vato mivantana any amin’ny toeram-pitrandrahana na kariera.
Sahirana koa ny mpandraharaha malagasy mikasika ny fanondranana any ivelany satria tsy manana kaonty amin’ny banky izy ireo any ivelany. Milaza anefa ny lalàna fa tsy maintsy amin’ny alalan’ny famindram-bola amin’ny banky (virement bancaire) ny fomba hampodiana ny vola vahiny aty Madagasikara. Raha fintinina, mila hovaina hifanaraka amin’ny toetr’andro sy ny tena zava-misy ny lalàna mikasika ireo voalaza ireo.
Fampiofanana ny mpitrandraka
Nilaza ny sekeretera jeneralin’ny MMRS, Imbiky Herilaza, fa horaisina avokoa ny fehin-kevitra tamin’ity atrikasa fakan-kevitra ity, ary hodinihin’ny minisitera sy ny fanjakana ny fomba hamolavolana azy ho lalàna. Anisan’ny novelabelarina nandritra ny fotoana, ny zava-misy, ny karazana fandikan-dalàna, ny sakana tsy ahafahana mampihatra azy ary ny vahaolana aroso, toy ireo naroson’ny mpandraharaha madinika ireo.
Araka ny famelabelarana nataon’ny tale jeneralin’ny MMRS, Razafintsalama Lalarison, maherin’ny 500.000 ny Malagasy misehatra na mitrandraka harena an-kibon’ny tany, faharoa aorian’ny tantsaha. Anisan’ny vahaolana ny fampiofanana azy ireo, hahafantatra bebe kokoa ny lalàna, sady hahay hanodina ny vatosoa eto an-toerana mba hiteraka asa sy hampitombo ny harinkarena faobe (PIB) ho an’ny firenena.